स्वास्थ्य/जीवनशैली – Page 10 – erupse.com
गर्भवती बन्न चाहान्छु, तर बच्चा राख्न चाहान्न
बीबीसी – पछिल्लो १० बर्षदेखि म बच्चालाई आफ्नो पेटमा हुर्काउन र उसलाई जन्म दिने सपना देखिरहेको छु । तर, म बच्चा सँधैका लागि आफूसँग राख्न चाहान्न, न त म आमा नै बन्न चाहान्छु । यसै कारणले मैले ‘सेरोगेट मदर’ बन्ने निर्णय लिएँ, जसकारण प्रसुतीपछि मलाई बच्चा मसँगै राख्न नपरोस् । सेरोगेट आमा बन्ने विचार म २१..
किन एकाएक चर्चामा आईन् पर्वत अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर हेमा छन्त्याल ?
म्याग्दीको सदरमुकाम स्थित बेनी अस्पतालमा अञ्चल अस्पतालले रिफर गरेका बिरामीको सफल शल्यक्रिया भएको छ । बागलुङ स्थित धवलागिरी अञ्चल अस्पतालले उपचार गर्न नसकेर रिफर गरिएका गर्भवतीलाई बेनी अस्पतालमा शल्यक्रिया मार्फत सुत्केरी गराइएको हो । सुत्केरी बेथा लगेर शुक्रबार अञ्चल अस्पतालमा भर्ना भएकी..
किन टुट्छ प्रेम सम्बन्ध
सम्बन्ध नतोड्ने भनेरै पनि महिला र पुरुष विवाह बन्धनमा बाँधिने गर्दछन् । तर समयसँगै हामी परिवर्तन हुन्छौँ र हाम्रो सम्बन्ध पनि । सम्बन्ध स्थिर नै हुँदैन । परिवर्तनलाई आत्मसात गर्नसके मात्र मानिसहरुको सम्बन्ध सुमधुर हुने गर्दछ । यदि यसलाई नबुझेमा पुरै सम्बन्ध नै टुट्न सक्छ । विवाह केवल दुई..
तनाव घटाउन गधासँग डेटिङ
बेलायतमा गधाले दिने थेरापी लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ । बेलायतको डेभोनमा भएको गधा केन्द्रमा क्यान्सरपीडित बच्चा र मानव तस्करीको शिकार भएका मानिसलाई गधामार्फत थेरापी दिइने गरेको छ । उता अमेरिकाको न्युयोर्कबाट १३० किलोमिटर पर एउटा गधा पार्क बनाइएको छ । आईबीएममा सफ्टवेयर इन्जिनियर रहेका स्टिभ..
यस्तो देश जहाँ ‘अनलिमिटेड सेक्स होलिडे’ मनाइन्छ !
एजेन्सी – कोलम्बिगाको आइल्यान्ड शहरमा ‘गुड गर्ल्स कम्पनी’ नामको एउटा कम्पनीले एउटा स्पेशल होलिडे अफर ल्याएको छ । यो अफर अरु दायाँबायाँ नभएर ‘अनलिमिटेड सेक्स होलिडे’हो । कम्पनीले तपाईलाई कोलम्वियाको आइल्याण्डमा चार दिनको विदा मनाउने सवर्ण अवसर प्रदान गर्ने छ । यी चार दिनमा तपाई केटीहरु छानीछानी..
१२० श्रीमती: सबैका लागि छुट्टै घर
दुनियाँका मानिसहरुमा फरक फरक खाले रूचि हुन्छन् । थाइल्याण्डका एकजना पुरुषको शौखका बारेमा थाहा पाउनुभयो भने तपाइँ हैरान हुनुहुनेछ । ती पुरुष यस्ता हुन्, जसले जुन ठाउँमा गयो सो ठाउँमा कम्तीमा एकजना महिलासँग बिहे गरेकै हुन्छन् । त्यस्तो पुरुषार्थका कारण उनले अहिलेसम्म १ सय २० जना महिलासँग बिहे..
सेक्सपछि,प्रेमिकामा पनि पूर्ण समर्पणको चाहना
प्रेममा शारीरिक सम्बन्धले कति महत्व राख्छ ? यो आ-आफ्नो बुझाई र भोगाइमा निर्भर गर्ने कुरा हो । कतिले ठान्छन्, प्रेम शुद्ध प्रेम मात्र हुनुपर्छ । कतिले यसलाई रोमान्सको रुपमा लिन्छन् । प्रेमी पनि त कोही आदर्श हुन्छन्, कोही विन्दास । कोही संवेदनसिल हुन्छन्, कोही रोमान्टिक । हामी भन्छौं, प्रेममा शारीरिक..
तपाईले आजसम्म कागतीको फाइदा बारे मात्र सुन्नु भएको छ । कागती वजन कम गर्न मात्र नभएर छालाको हेरचाहको लागि पनि काम आउँछ । तर आज हामी यसको बढी प्रयोगले कस्तो हानी पुग्छ भन्ने जानकारी दिन्छौं । मानिसले विहान उठेपछि कागती पानी खन्छन् जसले निकैं फाइदा पुराउँछ , तर यसको साइड इफेक्ट पनि छन् । पेट संवेदनशील..
हातले केही समाउन सिक्ने बेला बच्चाहरूले दुवै हातको प्रयोग गर्छन् । तर बल बढ्दै जाँदा उनीहरूले दुइटै हातको प्रयोग गर्न थाल्छन् । कतिपय बच्चाले दाहिने हातको प्रयोग बढी गर्छन् भने कतिपयले देब्रे हातको । हामी बच्चालाई दाहिने हातको प्रयोग गर्न सिकाउँछौँ किनकि मान्छेहरूले त्यही हातको बढी प्रयोग गर्छन्..
श्रीमती परपुरुषसँग सल्केको कसरी थाहा पाउने ?
एजेन्सी । श्रीमान् वा श्रीमती परपुरुष तथा परस्त्रीसँग सल्केको थाहा पाउन भने कठिन छ । तर, यही विषयलाई गरिएका केही अध्ययनहरुले भने पत्ता लगाउन सकिने दाबी गरेका छन् । यहाँ महिलाहरुले आफ्ना श्रीमान हुँदाहुँदै पनि परपुरुषसँग राखेको सम्बन्धकाबारेमा थाहा पाउन सकिने केही उपाय र तरिकाकोबारेमा चर्चा..